जामबाटै निकास ! – sunpani.com
जामबाटै निकास !
सुनपानी । १ चैत्र २०७६, शनिबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – कोहलपुर क्षेत्रमा लगातार तीन दिन सडक अवरुद्ध भयो । कहिले नेपालगञ्ज–कोहलपुर, कहिले पूर्वपश्चिम राजमार्ग त कहिले रत्न राजमार्ग बन्द भयो ।
दुई वटा दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएपछि सडकजाम भएका थिए । टिप्परको ठक्करले बुधबार पिपरीमा रामपति थारुको मृत्यु भयो । त्यसको भोलीपल्ट बसको अटोरिक्सालाई ठक्कर दिंदा चालक जयबहादुर रोक्का र सवार जीतबहादुर विकको मृत्यु भयो । दुवै घटनाका आफन्ती तथा स्थानीयले सडकमा रिस पोखे । सडकजाम गरेर यात्रुलाई रोकेर दबाब बढाए । सडकजाम गरेर आफ्नो मागहरु अघि सारे ।
दुर्घटना जानेर गरिने कुरै होइन । भवितब्य भइहाल्दा पाँच लाख रुपैया क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पछिल्लो समयमा सडकजाम गरेर माग बढाउने प्रवृत्ति नै देखिएको छ । जामबाट निकास खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।
रामपतिको हकमा दुई दिन सडक जाम गरियो । सात लाख दिने सहमति भयो । अटोरिक्सा रिक्सा काण्डमा पनि बिहीबार र शुक्रबार सडक जाम गरियो । साढे ६ लाख रुपैया दिने सहमति भयो । अटोरिक्साका चालक र यात्रु दुवै बैजनाथका भएकाले उनीहरुले बिहीबार अपरान्ह र शुक्रबार दिनभरी नै सुर्खेत जाने रत्न राजमार्गको च्यामामा बसेर सडक अवरुद्ध गरेका थिए । उता बाटो बन्द गरिरहदा यता वार्ताको प्रक्रिया चल्दै थियो । माग धेरै थियो । प्रहरीले बल प्रयोग गर्न थालेपछि वार्ताबाट निकास निस्कियो ।
सडकजाम गरेर निकास निकाल्ने प्रवृत्तिले अन्ततः सरकारलाई चुनौती दिएको छ । आफ्नो मागलाई बढाउन सडकजाम गरेर हजारौं यात्रुलाई अलपत्र पार्ने काम बन्द गराउनु पर्छ । राज्यले यस्ता मानवीयतासँग जोडिएका घटनाका पीडितलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ । प्रहरीको लाठी र पीडितहरुको ढुंगाले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।